Jenezy 7 - Ny Baiboly
Jenezy toko 7
Ny nidiran'i Noe tao amin'ny sambo fiara - Ny safo-drano.
1Hoy Iaveh tamin'i Noe: Midira ao an-tsambo fiara hianao sy ny ankohonanao rehetra, fa amin'izao olona miara-belona aminao izao, dia hianao no hitako ho olo-marina eo anatrehako. 2Ny biby madio rehetra dia fito tsiroaroa avy, lahy sy vavy, no halainao ho ao aminao; ary ny biby tsy madio kosa dia roa avy, lahy sy vavy, no halainao; 3ny voro-manidina koa, fito tsiroaroa avy, mba hampaharitra ny karazany tsy ho faty eto ambonin'ny tany, lahy sy vavy. 4Fa fito andro sisa dia handatsaka ranonorana amin'ny tany aho, mandritra ny efa-polo andro sy efa-polo alina; ka hofongorako eo ambonin'ny tany ny zavatra rehetra nataoko.
5Notanterahin'i Noe avokoa izay rehetra nasain'ny Tompo hataony. 6Efa enin-jato taona izy tamin'ny nahatongavan'ny safo-drano nanafotra ny tany. 7Niditra tao an-tsambo fiara Noe mbamin'ny zanany sy ny vadiny ary ny vinantovaviny mba tsy ho tratry ny safo-drano. 8Ny biby madio sy ny tsy madio, ny vorona sy izay rehetra mikisaka amin'ny tany; 9dia samy nanatona tsiroaroa, lahy sy vavy, nankao amin'i Noe, ao an-tsambo fiara, araka ny nandidian'Andriamanitra an'i Noe. 10Ary nony afaka fito andro dia nibosasaka teto ambonin'ny tany ny safo-drano.
11Tamin'ny taona fahenin-jato niainan'i Noe, tamin'ny volana faharoa, andro fahafito ambin'ny folo dia nipoitra ny loharano rehetra avy any amin'ny hantsana lehibe, nivoha ny vavahadin-dranon'ny lanitra, 12ary nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana nandritra ny efa-polo andro sy efa-polo alina. 13Tamin'izay andro izay dia niditra tao an-tsambo fiara Noe, nomban'i Sema sy Kama ary Jafeta, zanakalahin'i Noe, ary ny vadin'i Noe, sy ny vinantovaviny telo niaraka taminy; 14dia izy ireo sy ny biby rehetra isan-karazany, ny biby fiompy rehetra isan-karazany, ny biby rehetra mikisaka amin'ny tany isan-karazany, ary ny voro-manidina rehetra isan-karazany, ny voronkely, ny manan'elatra rehetra. 15Nanatona tsiroaroa izy ireo avy amin'ny nofo rehetra manam-pofon'aina nankeo amin'i Noe tao an-tsambo fiara. 16Lahy sy vavy avy amin'ny nofo rehetra no tonga izy araka ny nandidian'Andriamanitra an'i Noe. Dia narindrin'ny Tompo teo ivohony ny varavarana. 17Naharitra efa-polo andro teo amin'ny tany ny safo-drano. Nitombo be ny rano dia naingainy ny sambo fiara, ary nisavoana tambonin'ny tany. 18Mbola nitombo ny rano, ka nisondrotra dia nisondrotra tao amin'ny tany, ary ny sambo fiara nitsinkafona teny ambonin'ny rano. 19Nony efa nisondrotra teo ihany ny rano dia voasarony avokoa ny tendrombohitra avo rehetra, tambanin'ny lanitra manontolo. 20Ka tafasondrotra dimy ambin'ny folo hakiho nihoatra ny tendrombohitra voasarony izy. 21Maty avokoa ny nofo rehetra mihetsiketsika eto ambonin'ny tany ary ny olombelona rehetra. 22Maty daholo rahefa mety ho zavatra mitoetra amin'ny tany maina, rahefa mety ho zava-manam-pofon'aina teo am-bavorony. 23Ringana avokoa rahefa mety ho zavatra tambonin'ny tany, hatramin'ny olombelona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny zava-mikisaka mbamin'ny vorona eny amin'ny habakabaka; levona tsy nisy teto an-tany intsony izany; fa Noe sy ireo niara-nitoetra taminy tao an-tsambo fiara ihany no sisa. 24Dimam-polo amby zato andro no nahatondraka ny rano tambonin'ny tany. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0576 seconds